System Mechanic 9.5 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဒါ​က​တော့ ​နောက်​ဆုံး​ထွက် version 9.5 ​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ ​ကြ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​လို​ချင်​တဲ့​သူ​များ error ​နှင့် ​မ​ကင်း​ကြ​သူ​များ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​နိုင် ​ကြ​ပါ​တယ် .
Download rapidshare ၊ Download mediafire ၊ Download multiupload
​လူ​ဆိုး February 26, 2012 at 10:50 PM
​အ​ကို​ရေSurvey ​တွေ​လုပ်​မှေ​ဒါင်း​လို့​ရ​မယ်​ပြော​နေ​တယ်...​အဲ​တာ​ဆို​ရင် ​ဒေါင်း​တာ​ထက်​ကို​ပို​ကြာ​နေ​မှာ​ဗျ
Photoshop ​အ​တွက် Water Brushes